Aragtida 13-Sano ee Heerka Isbeddelka Isbeddelka wuxuu udhaqaaqaa Dhaqdhaqaaqa Dhallinyarada
Sanadkii 2007dii, 13 sano jirka Alec Loorz ayaa loo diray dhiirigelinta dhaqdhaqaaqa isbeddelka cimilada, laakiin wuxuu ku adkaaday in uu helo meel hagaagsan sababtoo ah dhalinyaradiisii oo la dareemay khibrad la'aan. Sidaa daraadeed, wuxuu wax ka qabtaa gacmihiisa, wuxuu abuuray qoob ka ciyaara, wuxuuna bilaabay inuu ka hadlo ... oo ka hadlo. Waxa uu hadda la hadlay in ka badan 750,000 qof oo adduunka ah. Jidka oo dhan wuxuu aasaasay ururka iMatter, oo ah hay'ad loo qoondeeyey codka jiilka ugu saameynaya isbedelka cimilada. Hadda, iyadoo la kaashanayo Xarunta McKnight Foundation, iMatter wuxuu keenayaa olole cusub oo dhalinyaro ah oo awood u leh dhalinyarada sare ee Upper Midwest, waxayna mar horeba aragtaa natiijooyin xiiso leh.
Ololaha iMatterNow wuxuu abuurayaa shabakad hoggaamiyeyaal hoggaamiyeyaal dhalinyaro ah oo wadaagaya aragtida ah in la soo afjaro dhibaatada cimilada noloshooda. Ololaha ayaa ka dhigaya dhibaatada cimilada adigoo awood siinaya hoggaamiyeyaal dhallinyaro ah (inta badan dugsiga sare iyo dhallinyarada dugsiga dhexe), si ay u xoojiyaan bulshadooda si ay uga qaybqaataan dhammaystirka dhibaatooyinka cimilada.
Iyada oo ka jawaabeysa tallaabada kooxda iMatter, Golaha St. Louis Park wuxuu ogolaaday Xilinta Xasilinta Cimilada, iyada oo magaalada ku hawlan sidii loo dajin lahaa himilooyin xooggan si loo yareeyo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ay dhalinyaradu ku lug lahaadaan. Hadda, qorshe lagu baabi'inayo qiiqa aqalka dhirta lagu koriyo 2040 (ama helitaanka "em-zero emissions"), waa la horumarinayaa oo waa la dhammaystiri doonaa gugaan.
"Waqtigaa hadda, si wadajir ah u yimaaddo ... si loo hubiyo mustaqbal nololeed oo naga mid ah, carruurtaada, caruurtaada iyo jiilalka soo socda." -ZOSHA SKINNER, ST. LOUIS PARK DUGSIYADA DUGSIGA SARE
Xalinta Qaraarkan ayaa ahayd natiijadii ololaha ee aragtay ardaydu in ay soo bandhigaan in ka badan 550 saxiixyo codsi arday, oo ay weheliyaan Kaarka Warbixinta Cimilada Dhallinyarta. Ardaydu waxay siiyeen St. Louis Park darajada guud ee B-; qorshe lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada, magaaladu waxay kasbatay D-, maadaama aysan jirin qorshe rasmi ah.
Fure u ah guusha ardayga ayaa dib u qaabaynaya arrinka isbeddelka cimilada. Owen Geier, oo ah madaxa sare ee St. Louis Park High School, ayaa ku boorriyay Golaha "in ay talaabo qaadaan ayna noqdaan magaalooyin hogaaminaya qorshe hawleedka cimilada oo ka bilaabma waxa cilmi ahaan lagama maarmaanka u ah ilaalinta mustaqbalkeenna oonan ka ahayn waxa badanaa laga yaabo inay siyaasad ahaan Suurtagalnimada. "Zosha Skinner, oo ah madax sare oo ka tirsan Dugsiga Sare ee St. Louis Park, ayaa xidhay shirkii ugu horreeyay ee golaha magaalada iyada oo leh," ... wakhtigu hadda waa in uu isu yimaadaa ... si loo hubiyo mustaqbal nololeed noo, carruurtaada, iyo tan iyo ka ab ka ab.
Dadaallada kooxdu waxay heleen warbaahin ballaaran oo maxalli ah, oo ay ku jiraan MPR, Star Tribune, iyo Midwest Energy News. Ceymiskan, oo ay weheliso dadaal kale oo la taaban karo (oo lagu soo bandhigay Cayaaraha Gobolka MN iyo dhowr waxyaalood oo kale) ayaa ka caawiyay ololaha in uu faafo. Waxaa hadda socda ololayaal magaalooyinka kale ee Minnesota, oo ay ku jiraan Edina, Hopkins, Apple Valley, Eden Prairie, Stillwater, iyo Grand Marais. Meelo kale oo ku yaalla Dhulka Dhexe, waxaa jira dhalinyaro firfircoon oo ku yaal Illinois, Indiana, iyo Iowa.
Ogsoonow: iMatter waxaa maalgaliya maalgalinta Qalalaasaha Dhaqan ahaaneed ee Dabiiciga ah